Westville Bold Classic Jikada naqshadeynta by Jonathans-Jikada qasabadaha, Tuubbada Feylka Weelka, Qasabada Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Westville Bold Classic Jikada naqshadeynta Jonathans
2020 / 08 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7414 0
"Waxaan ahay naqshadeeye garasho leh," Jonathan Gordon, oo ah naqshadeeyaha hoggaanka iyo milkiilaha Naqshadeynta Jonathans, LLC, ayaa leh. Waxaan eegay dadaallada dhanka weynaanta iyo waxqabadka, hase yeeshee maadaama aan xitaa haysto diblooma injineeriyadda oo aan jeclahay inaan diyaariyo cashada, waxaan hubiyay howshan sida: Ma ku faraxsanahay halkaan?
Waxaa jira xaqiiqo dhab ah oo Gordon uu uga hadlayo guriga Ashley iyo Jim, oo raadiyay wakaaladiisa inay yihiin dadka deegaanka ee ku nool New Haven, Connecticut. Waxay daggan yihiin degmo taariikhi ah oo leexin iyo leexasho dheeraad ah ka badan xaafad loogu talo galay shaxda hagaagsan, oo lagu xardhay guryo muujinaya shakhsiyaad caqli badan. Guryahoodu waxay ahaayeen kuwo la dhisay sanadkii 1930-kii, waxaana ka dhex curtay hal abuur dhismeed taas oo ka dhigaysa inay u egtahay “tudor, laakiin marka lagu daro waxay u badan tahay reer Fiktooriya, si kastaba ha noqotee waxay u badan tahay farsamo yaqaan A-frame ah,” ayuu yidhi, xoogaa kaftan codkiisa. “Runtii waa guri caddaalad ku dhisan. Waxay leedahay xaqiiqo la hubo oo ka dhigaysa mid dhib leh in hoos loo jaro. ”
Saxanka Kohler Whitehaven ayaa loo isticmaalay saxanka saxan ee "muhiimka ah", halka jasiiraddu ay leedahay Kohler Iron / Tones saxanka loogu diyaar garoobayo. Mid walbana waxaa lagu dhejiyay naxaas gubanaysa Caleemaha California.
Ashley iyo Jim waxay caan ku ahaayeen magaca Gordon kadib markay ka macaasheen jikada gaarka ah, taas oo ku cidhiidhsaneyd hareeraha guriga gadaashiisa oo ay kaga soocday qolka cunida derbi. Waxay rinjiyeeyeen armaajo buluug saqdii dhexe, waxayna sameeyeen wixii ugu weynaa inay iska indhatiraan saqafyada dhibcaha. Waxay ahayd asal ahaan fudud in la sameeyo, maadaama waqtigooda lagu qaatay “sq. qoob-ka-ciyaarka ”aag meesha ku yaallay waxay ahayd meel keliya oo loogu talagalay qalabka guryaha yar yar iyo miisaska dusha sare ee caatada ah. "Ma jirin qol kasta oo laga dhaqaaqo halkaas," ayuu yiri Gordon. Waxaan haysanay seddex albaab oo aan lashaqeyno, taas oo ah meel caadi ah oo guryaha da'daas ah, marka waxaa muuqatay inaan jeclaan laheyn inaan darbiga hoos u dhigno. ”
Isla markii qolka cuntada iyo jikada ay ahaadeen hal guri dheer oo ku yaal barxadda, Gordon waxaa laga yaabaa inuu ka fekero dib-u-cusboonaysiinta suurtagalka ah ee cuntada joogtada ah iyo madadaalada mararka qaarkood. "Waxay i fareen in had iyo jeer ay jireen laba cunto kariyeyaal jikada dhexdeeda," ayuu yidhi. “Waxay u baahneyd inay ahaato mid ujeedo leh — oo leh goob booqdayaal hufan oo dhex wareega guriga iyo barxada - waxayna ubaahantahay inay ahaato mid isbadalo halka sikastaba ay tahay in la dhameystiro taariikhdii hore ee guriga.” Iyo, tan ugu weyn, waxay u baahneyd inay la kulanto mid kasta oo kama dambeys ah waa inuu ku jiraa liistadooda illaa jikada ugu dambeysa.
Jasiiraddu waxay leedahay saddex-geesood oo jilicsan oo ka kooban saddex dhinac, taas oo ka dhigaysa mid suurtagal ah in "lagu dhaqo digsiga qaboojiyaha, ku dheji khaanadda dhexdeeda, ka dib markii dambe ayaa loo soo bixiyaa si loogu diyaariyo casho dhinaca ka soo horjeedka ah," ayuu yiri Gordon. Xargaha Bulbrite ayaa iftiimiya adduunka.
Jikada jikada rabitaankeedu wuxuu lahaa kabadh madow oo dhammeeyey naxaas. Waxay lahayd jasiirad leh keyd ballaaran oo u dhow bakhaar qarsoon. Waxa intaa dheer oo ku jiray qolka buraashka, qorista kaydinta, xarun quudinta canine, iyo espresso iyo meel cabitaan ah. Ugu dambeyntiina, waxay rabtay inay haysato dhammaan qalabka guriga ee cunto kariye ay macquul tahay inuu doono. Dhibaatada dhabta ah? Gordon waxay ahayd inuu go'aansado inuu barto sida loo wada dhan yahay 392 sq. Ft.
"Waa inaan si dhaqso leh uga fiirsadaa," ayuu yiri Gordon. “Waxaan sawiray aniga oo hal shay ka qaadanaya qaboojiyaha si aan ugu diyaariyo cashada, aniga oo u qaadaya jasiiradda si aan u xoqo oo aan u sii diyaar garoobo, oo aan ku dul tuuro safka si aan u diyaariyo cashada, iyo wixii la mid ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan go'aamiyo wareegga saxda ah ee guriga, si ay u qaadanayeen tallaabooyin yar oo suurtagal ah wixii ay doonayeen. ”
Meeshan waxaa loo sameeyay espresso, khamri, iyo cabitaanno kala duwan oo la doonayo, oo ay ka buuxaan khaanado loogu talagalay qalabka. A Danby Silhouette Beverage unugyada dhexe ee goobta.
Wuxuu naqshadeeyay jasiirad 24-inch ah oo leh kabadho jilicsan oo dhow oo si fiican looga furi karo labada dhinacba, oo wuxuu galiyay saxan yar oo ku dhexyaala carrara miiska dusha sare si loogu nadiifiyo wax soo saarka iyo wixii lamid ah waxay noqon kartaa shaqooyin waaweyn). Baaxadda ayaa ku hoos jirta dheriga dheriga, dhexda cabbitaanka waxay leedahay keyd dheeri ah oo loogu talagalay qalabka, iyo kaneecada ay jecel yihiin waxay leedahay guri qarsoodi ah oo loogu talagalay alaabada lagu ciyaaro iyo daaweynta. Gordon si ula kac ah ayuu ula kac ugu sameeyay, xitaa wuxuu ka warqabaa si sax ah meesha ay ku iibinayaan dhir udgoon iyo gogo '.
"Waxaan u hubiyey sidii xujo oo kale, sababtoo ah waxaan aad uga taxaddarnay sida ay dhammaan u shaqeyn karto," ayuu yidhi. Si kastaba ha noqotee, khiyaanadu waxay ahayd inaanu intaa sii dheer u isticmaalnay dhammeystirro qurux badan si aysan u ahayn wax walba oo ku saabsan in la shaqeeyo, oo waxaan ku sharfnay taariikhdii hore ee guriga. Golaha wasakhda ee mugdiga ah ayaa mar labaad lagu sameeyay gudaha 30-meeyadii, sidoo kale wuxuu ahaa foorarida tareenka dhulka hoostiisa mara iyo dusha miisaska marmar. Xitaa dadka lugeynaya waxay leeyihiin Edison guluubka nalka u eg. ”
Minka-Lavery khafiif ah ayaa ka laalaada meel ka sarraysa goobta cunitaanka ee barxadda. Dhamaadka fog ee jikada waxaa ku yaal armaajo xaaqin.
Dayactirka waxaa lagu fuliyay horaantii sanadkaan, waqtiga gu'ga. Gordon wuxuu u mahadcelinayaa lamaanaha iyo shaqaalihiisa sida ay ula qaateen sida saxda ah ee looga baahan yahay howshan, meesha uu ku qanacsan yahay wuxuu noqon lahaa cunto karis farxad leh-si kastaba ha ahaatee wuxuu ka weyn yahay diyaar garowga inuu shaqada u aado Ashley iyo Jim.
"Subax kasta, Jim wuxuu igu salaami jiray latte ka hor inta aan shaqada tagin," ayuu yidhi. Si kastaba ha noqotee waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee aan waligey haysto. ”
Hore:: Sidee Ayaan Ku Bixiyay 'Fasaxii Xagaagii' Next: Suuqa Sensor Faucet wuxuu abuuri doonaa Fursado Kobcin Cusub sanadka soo socda - StartupNG